Mail ka qowladda pachinko waxtar leh ee horyaalka si ay u doortaan
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Mail ka qowladda pachinko waxtar leh ee horyaalka si ay u doortaan
In tii pachinko, waxa uu soo diray ganacsi e-mail ee maalinta hawlaha qalliinka. E-mail waa qaybta ugu, subaxdii u furan ka hor iyo qado, iyo waxa uu noqday badan qowladda pachinko u soo diri jiray fiid iyo habeen afar jeer. Inta lagu guda jiro dhacdo weyn, waxaa laga yaabaa in ay sii kordhiyaan. In mail samatabbixiyey emails waxba maalin noocan oo kale ah, oo ka hadlaya mail wanaagsan oo waxtar leh, waa mail habeen ka hor ku dhow furan ka hor mail subaxdii.
First, mail subaxda, laakiin waxaan doonayaa inaan sii eegaya ugu xidh-mail. model Event iyo markii ay dhacdo qabtay ee maalinta ama, waa hab ka mid ah furitaanka Xintai, maxaa yeelay waxa ay ku dul mail ugu subax, inaad si fiican u sii daawashada adag.
Intaa waxaa dheer, model in racfaan midabka iyo geesi characters, waxaan shaki ku jirin u malayn in model ah ayaa xoog maalintaas. Laakiin waxaan doonayaa in la ogaado in, in dhowr maalmood ay dhacdo model dhacdo ahaa isku mid, in -Gudoomiyaha ah model ay dhacdo, waxaa dhacdo mashiinka soo kabashada waa.
boostada subax maalin walba, sidoo kale waxaad ka arki kartaa iyada oo lagu daydo dhacdo sida Gase. Iyo, in si sahlan si aad u hesho ugu boostada, waa dukaan ah dhiirogelin. Xataa in shaqada ee caadiga ah, ama waxay leeyihiin decoration ah oo aan caadi ahayn agagaarka magaca model ah, in kiiska halkaas oo midabka ah ee asalka ah waqtiga ay dhacdo ama ay is badalaaan in cas iyo madow, in arrinta u qasadeen, haddii ay dhacdo maalinta, waxaa jira xaalado badan oo racfaan I.
mail aroortii sida qowladda pachinko ah, sababtoo ah waa ganacsi ka dhigan tahay in uu soo jiito macaamiil, qayb ka mid ah in racfaan ka badan qayb ka mid ah oo kale, waxaad u leeyihiin in ay ka soo taagan. Waxaa intaa dheer, fadlan eeg Fiiro gaar ah sidoo kale ereyada.
Tusaale ahaan, in ay dhacdo dooneysa kubad ka mid ah gobolka ugu fiican, haddii aad awoodid waxaa jira kalsooni macquul ah, racfaan loo baahnayn, sida in ka mid ah heshay ugu adag oo heshay qaraxa, iwm, waxaad waqti weyn baxay waa, tan iyo markii ay jiraan xaalado badan oo soo ordaya loogu talagalay dhacdooyinka, waa dareenka ka waxaa loo baahan yahay isticmaalka ereyga.
Next, waxaan rabnaa in aad ka tago email xaqiijinta waa mail habeen u dhiibay in u xiran yihiin oo kaliya ka hor. The mail habeenkii
, Tan iyo markii uu ku qoran qiimeynta ay kubada qorrax ka soo baxa iyo maalinta ku xigta oo aad warbixin ka dhacdo, waa muhiim in aad ka fikirto dhinaca dagaalka ee maalinta ku xigta ka. Si kastaba ha ahaatee darajayn heshay, heshay sababtoo ah waxaa laga yaabaa in aad posted Te daray yar, waxaan u malaynayaa, wuu wanaagsan yahay in ay qabsadaan si ee tixraaca si aan rumaysan oo dhan.
, si kastaba ha ahaatee, in soo socda ee ku qortid magaca model ah waa magaca model ahaa runtii ka baxay, waa sababta oo ah ku dhowaad, amaah laga yaabaa barta. Intaa waxaa dheer, boostada caadiga ah aan joogto ahayn waqtiga, sababtoo ah waxaa sidoo kale waa arrin ah halkaas oo ay jiraan macluumaad gaar ah, fadlan iska hubi.
gaar ahaan sidan oo kale, soo socda macluumaad gaar ah loo soo diray, waxa ay u muuqataa in dad badan oo hore fiidkii ka galabtii. In fiidkii, sababtoo ah waa waqti in hawlgalka kor u kaco, waxaa si dabiici ah soo diri doonaa isha, kuwii hore ogaaday waa la helay.
si aad u soo baxaan nooca qowladda pachinko waxaa boostada, akhri dukaamada of caado, waxa ku caawin kara ama macluumaad si, iyo isku dayaan si ay u falanqeeyaan aad boostada waxa uu noqonayaa mid macno leh.